Diet amin'ny isa - Dingana tokony hatao tsara | Nutri Diet
Sergio Gallego | | Vatsim-pivelomana
ankehitriny misy sakafo an-jatony izany dia mampanantena ilay olona manapa-kevitra ny hanaraka azy ireo, valiny eo noho eo miaraka amin'ny lalàna faran'izay kely ezaka. Izy ireo dia malaza amin'ny anarana hoe sakafo fahagagana, ity karazan-tsakafo ity dia misy mpanaratsy sy mpiaro azy. Amin'ity indray mitoraka ity dia holazaiko anao ny a ny malaza indrindra ary inona no laza malaza kokoa: ny isa sakafo.
tokoa ianao efa nandre momba azy ary liana ianao hahafantatra raha tena miasa na misy vokadin'ny fikomiana mampidi-doza toy ny mitranga amin'ny ankamaroan'ny sakafo an'io karazana io. Manaraka izany dia holazaiko anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba izay misy azy io ny isa sakafo ary raha azo sokajiana ho fihinana fahagagana sa izy karazana drafitry ny fihenan-danja izany dia hanampy anao hihena sy hanafoana ireo kilao fanampiny ireo.
1 Inona no atao hoe sakafo?
2 Ny fatiantoka amin'ny sakafo isa
3 Sakafo fahagagana ve?
Inona no atao hoe sakafo?
Ity karazana sakafo ity dia miasa ao fomba hafa sy tany am-boalohany raha oharina amin'ny karazana fomba fampihenana lanja hafa. Ny sakafo resahina sakafo isa arakaraka ny proteinina, tavy na gliosida ao anatiny. Izay rehetra mihinana sy mihinana ianao manana andiana isa maromaro, amin'ny ankapobeny ny sakafo misy kaloria betsaka dia manana teboka marobe ary ny kaloria salama indrindra na kely indrindra kely ny isa azon'izy ireo.
Ny olona tsirairay manapa-kevitra ny hanomboka ity karazan-tsakafo ity dia manana karazana coupon isan'andro miaraka amin'ny isa izay miovaova arakaraka ny lahy sy ny vavy, ny lanja na ny taonan'ny olona. Isan'andro, afaka mihinana ilay olona mandra-pahatongany andiana teboka maromaro farafaharatsiny, ka mila manoratra ianao ary manara-maso ireo teboka lany mba tsy hihoatra an'io fetra io. Ny sakafo isa dia mamela anao hihinana karazana sakafo rehetra raha mbola tsy mihoatra ny isa lany ilay olona.
Araka ny ny mpanohana ny sakafo toy izany, raha manaraka ny fitsipika napetraka ianao mahazo very lanja ianao tsy misy olana. Na izany aza, tsy voaporofo fa tsy tonga izany vokatr'izany amin'ny farany ary 100% ny a sakafo mahasalama sy voalanjalanja. Raha ny olona mahavita tsara ny sakafo, aza manova ny fahazaranao ary araho ny karazana sakafo mahasalama sy voalanjalanja, mety hahazo lanja indray ianao.
Ny fatiantoka amin'ny sakafo isa
Rehefa tonga ny fahalalana raha ny sakafon'ireo isa malaza tsy manimba fahasalamana izany, ilaina ny mandinika manokana ireo toetra tsy maintsy ananana sakafo mahasalama sy voalanjalanja.
Tsy maintsy mahazo ianao fifandanjana eo anelanelan'ny kaloria nohanina sy ireo izay lany isan'andro. Raha lany izy ireo kaloria kely noho ny ingéna, ny sakafo dia tsy azo antoka na soso-kevitra, ka izany no manimba ny fahasalamana.
Ampitomboy ny fihinana tavy tsy masaka ary mampihena ny fihinanana tavy matavy sy tavy trans.
Ampitomboina ny sakafo toy ny legioma, voankazo, voanjo, voamaina feno ary legume.
Mampihena ny fanjifana siramamy sy sira amin'ny sakafo rehetra.
Raha esorinao ireo andinindininy ireo amin'ny ny isa sakafo, azonao atao ny manamarina fa misy ambany ny fihinanana kaloria satria raha tsy izany no izy dia tsy azo atao ny mihena. Mifanohitra amin'izany, amin'ny misy fahalalahana tanteraka hihinana, mety misy ny mety hisian'ny olona iray aza mihinana voankazo na legioma rehefa manaraka an'io karazan-tsakafo io. Ankoatr'izay dia afaka manohy mihinana ilay olona tototry na matavy trans tena ratsy amin'ny vatanao izany. Ny fehiny dia momba izany amin'ny sakafo fahagagana izany dia hanampy anao hihena amin'ny fotoana fohy fa amin'ny fotoana maharitra kosa vokadin'ny fikomiana mampidi-doza izay hahatonga anao hahazo kilao betsaka noho ny amin'ny fiandohan'ny sakafo.
Sakafo fahagagana ve?
Avy amin'ny fototra izay ny isa sakafo tsy mampanantena fihenan-danja amin'ny fotoana firaketana toy ny hoe manao sakafo fahagagana maro izy ireo. Ity karazan-tsakafo ity dia miantoka ny fahaverezanao antsasaky ny kilao sy iray kilao herinandro, zavatra mety ary mety ho ao anatin'ny fenitra amin'ny karazana drafitra fihenan'ny lanja salama. Ny fahombiazan'ity sakafo ity dia ny fihinanana azy ireo kaloria kely kokoa amin'ireo izay may. Ka raha manao izany ianao safidy tsara amin'ny sakafo sy otrikaina ilainao isan'andro isan'andro, tsy misy antony tokony handinihana ireo sakafo isa toy ny sakafo fahagagana.
Raha avy vita hoy ny sakafo, mbola manana karazana sakafo voalanjalanja sy voalanjalanja miaraka amin'ny otrikaina ilaina ary mameno izany ianao miaraka amin'ny fanatanjahan-tena isan'andro, tsy hanana olana ianao hihazona ny lanjanao ary aza tratra miaraka amin'ireo ny isa sakafo. Hevitra iray hafa amin'ity karazan-tsakafo ity, dia tsy manery anao hividy izany fanampiana ara-tsakafo sy sakafo mba hanonerana ny tsy fisian'ny otrikaina, satria miaraka amin'ny sakafon'ny teboka afaka mihinana ny zava-drehetra ianao ary tsy manala ireo otrikaina tena ilaina mila miasa tsara ny vatana.
Raha tsorina ny isa sakafo fomba iray hampihenana lanja izany mahomby sy mahitsy ihany noho ny karazan-tsakafo hafa izay manana ny fahaizany manokana vondrona ny sakafo amin'ny vondrona samihafa arakaraka ny kaloria sy ny lanjan'ny sakafo. Raha manapa-kevitra ny hanohy ianao ity karazan-tsakafo ity , zava-dehibe ny fiovanao ny fahazarana mihinana anao ho an'ny ho avy satria raha tsy izany dia voalaza ny sakafo fihinana ho tsy nisy ilana azy. Tadidio fa raha manaraka karazana sakafo mahasalama sy voalanjalanja ho very ireo kilao fanampiny izay manelingelina anao indrindra ary hataonao amin'ny fomba izay tsy handratra ianao na amin'ny fahasalamanao na amin'ny vatanao.
Avy eo apetrako ianao horonantsary manazava momba ny sakafo isa ary inona hanampy anao hahafantatra bebe kokoa izany ny sakafo voalaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo isa
Voatavo fanosotra voatavo
Ahoana no hiadiana amin'ny fanahiana sy fahaketrahana